by Admin on Fri Jul 31, 2009 2:43 pm
ကျွန်တော်က မုံရွာကွန်ပျူတာမှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကကျောင်းတက်ခဲ့တာပါ။ ကျောင်းတုန်းကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံပြီးကျောင်းပြီးသွားချိန်အပြင်မှာပြန်တွေ့နိုင်ဖို့ ဒီဖိုရမ်လေးကို ဆောက်ထားတာပါ။ အားလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
by yee khin zaw on Tue Aug 04, 2009 6:00 pm
Admin wrote: ကျွန်တော်က မုံရွာကွန်ပျူတာမှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကကျောင်းတက်ခဲ့တာပါ။ ကျောင်းတုန်းကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံပြီးကျောင်းပြီးသွားချိန်အပြင်မှာပြန်တွေ့နိုင်ဖို့ ဒီဖိုရမ်လေးကို ဆောက်ထားတာပါ။ အားလုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
why don't write by yourself ?
Admin need to edit page or not ?
by Admin on Wed Aug 05, 2009 4:18 pm
လွတ်လွတ်လပ်လပ်လို့ပြောလိုက်တာဟာ ပေါက်ကရရေးပါဆိုတဲ့ သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
Positive Freedom ပုံစံပါ။ဟီး
by yee khin zaw on Wed Aug 12, 2009 5:24 pm
Admin wrote: လွတ်လွတ်လပ်လပ်လို့ပြောလိုက်တာဟာ ပေါက်ကရရေးပါဆိုတဲ့ သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
I want to upload Picture & video post.
please do for that!
by winkoko on Thu Aug 13, 2009 9:22 am
My Name is Win Ko Ko.
I am the same batch with Daw Yi Khin Zaw.(အဟိ အဲဒီရီခင်ဇော်က အနီရောင်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ သူနဲ့ ခင်ကြောင်းပြောထားရတာ တော်ကြာ ကိုယ်မဟုတ်တာလုပ်ရင် သူက ဘန်းနေမှာစိုးလို့ တွီ စတာနော်... သယ်ရင်း)
တူတူတက်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းကြီးက အစ်ကိုတွေ ညီတွေ အစ်မတွေ ညီမတွေ အားလုံးကို ဒီနေရာကနေ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ် .....
by gabar on Fri Aug 14, 2009 10:36 pm
ဒီဖိုရမ် လေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ရလုိ့ ၀မ်းသာပါတယ်။